नियमित ४ वर्ष सम्भोग गर्दा पनि महिला भर्जिन, कारण थाहा पाएपछि डाक्टर पनि हैरान — Sanchar Kendra
१एकैदिन यति धेरै संक्रमितको मृत्यु भएपछि नेपाली सेनाले बल्ल चाल्याे यस्ताे कदम, देशभर तरंग
२शीतलनिवास पुग्नु पहिले बालुवाटार पसेका जसपा अध्यक्ष ठाकुर र महतोले राष्ट्रपतिलाई बुझाए यस्तो पत्र
३गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि गुरुङ नै नियुक्त
४काठमाडौँ उपत्यकामा आज ३९२४ जनामा संक्रमण पुष्टि
५आज ९३०५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १६८ को मृत्यु
६कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भकाभक किन पछि हट्दैछन काठमाडाैं उपत्यकाका ठुला अस्पताल ? यस्तो छ कारण
७फेरि गयो ५.८ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
८कोरोनालाई जित्नुभयो ? अब अनिवार्य ध्यानमा राख्नुहोस् यी कुरा र भुलेर पनि कहिले नगर्नुहोस यी गल्ति
९घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
१०नयाँ सरकार गठनका लागि बाबुराम भट्टराईले राखे यस्तो प्रस्ताव
११नेपालका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, शय्यामा छट्पटाउँदै बिरामी
१२नर्सको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले गरिन् यस्तो ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
चीनको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार चीनको एक शहरमा एक दम्पतीले बिहे गरे पछि नियमित ४ वर्षसम्म सम्भोग गरी रहदा पनि महिला गर्भवती नभएपछि उनीहरु आफ्नो बच्चा जन्मिएन भनि डाक्टरकहाँ समस्या लिएर गए ।
ति दम्पतिले आफ्नो कुरा डाक्टरलाई भने कि हामिहरुले नियमित रुपमा सधै सम्भोग गर्छौ तर पनि गर्भ रहन सकेन । यस्तो कुरा डाक्टरलाई भनिसकेपछि डाक्टरले उनीहरु दुबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरे।
स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हेर्दा उनीहरुमा बच्चा जन्माउन सक्ने कुरा पत्ता लग्यो र कुनै कमजोरी देखिएन । बरु डाक्टरले भने अर्कै नौलो कुरा पत्ता लगाए । डाक्टरले जाँच गरेपछि थाहा पाए कि ती महिला त अझैसम्म कुमारी नै थिइन् ।
उक्त मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित समाचार अनुसार दुवै दम्पतीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि डाक्टर छक्क परेका थिए । किनकि ती दम्पतीले ४ वर्षदेखि नियमित सम्भोग गरिरहेको कुरा जनाएका थिए । तर महिला भने कुमारी नै थिइन् ।
यति हुँदाहुँदै महिला कसरी भर्जिन हुन सक्छिन् त ? यि सबै कुरा थाहा पाएपछि डाक्टरले उनीहरुसँग सम्भोग कसरी गर्नुहुन्छ भनि सम्भोगको तरिका बारेमा सोधे । त्यसपछि उनीहरुको जवाफ सुनेर डाक्टरले हाँसो थाम्न सकेनन्।
किनकि उनीहरुले कहिल्यै प्राकृतिक तरिकाले सम्भोग गरेकै थिएनन् । वास्तवमा ती लोग्नेस्वास्नीमा सम्भोगको बारेमा निकै अनभिज्ञता रहेको पाइयो । महिलाका अनुसार उनका लागि सम्भोग निकै पीडादायक हुने गरेको थियो । २६ वर्षका पति र २४ वर्षकी जवान पत्नीले आफ्नो त्यस्तो समस्याका बारेमा बताउँदा डाक्टरहरु नै अचम्ममा परे ।
लोग्नेस्वास्नीले नियमित प्राकृतिक सम्भोग नगरी गुँदमैथुन, मुखमैथुन तथा हस्तमैथुन जस्ता अप्राकृतिक यौनक्रिडाहरु गर्दा रहेछन् । उनीहरुमा गर्भ रहनका लागि योनी र लिंगबीचमै शारीरिक सम्पर्क हुनुपर्दछ भन्ने कुरा जानकारी नरहेको थाहा पाउँदा डाक्टर अचम्म परे।
यसरी प्राकृतिक रुपमा यौनांग सम्भोग नगरीएकी पत्नी चाहीँ चार वर्षको नियमित यौनक्रिडापश्चात् पनि भर्जिन नै रहन सफल भएकी रैछन् ।
नेपालकै अर्को रोचक प्रसंग- निर्मला (नाम परिवर्तन)का पति अमेरिकामा थिए । काठमाडौंमा उनको प्रेमी थिए, बिक्रम शर्मा (नाम परिवर्तन) । शर्मासँग उनी लामो समय डेटिङमा रहिन् ।
कहिले ककनी, कहिले धुलिखेलमा यो जोडीले प्रेम अनुरागमा समय बितायो । घरि–घरि शारिरीक सम्बन्ध पनि जोडियो । निर्मला अमेरिका पुगिन् बिक्रम काठमाडौंमै आफ्नो पेशा व्यावसायमा व्यस्त छन् । उनीहरूको अहिलेको सम्बन्ध अपरिचित जस्तै छ । उनीहरूको सम्झौताको सम्बन्ध डिस्कोबाट सुरु भएको थियो ।
‘अफिसको काम अबेर सकिएपछि दरबारमार्गको क्लव छिर्ने गर्थें, उनी पनि त्यहाँ एक्लै बसेको देखेपछि डान्सका लागि अफर गरें । केही घुट्की पियौं त्यसपछि परिचय बढ्यो’, बिक्रम विगत कोट्याउँछन्,‘एउटा सम्झौताको सम्बन्धमा केही समय रमाइलो गरौं भन्ने सल्लाह भयो । र, हामी अफेयरमा थियौं ।’
ठमेलको एउटा व्युटी पार्लर सञ्चालन गरेकी अस्मिता (नाम परिवर्तन)सँग वानेश्वरको एक होस्टेलमा बस्ने गुरु अधिकारी (नाम परिवर्तन)को भेट सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो । उनीहरू क्लवमा भेट्ने योजना बन्यो । ठमेलको एउटा क्लवमा राम्रो चिनजान भएपछि अस्मिताले नै सम्बन्धमा रहनका लागि गुरुलाई प्रस्ताव गरिन् ।
आफ्ना पति अस्ट्रेलियामा रहेको र ६ महिनामा फर्किने बताउँदै गुरुसँग त्यसबेलासम्मको सम्बन्ध कायम राख्ने सहमति बनेको थियो । एक्लै बस्ने अस्मिताको घरमै गुरुका धेरै समय बिते । अहिले दुवैको सम्पर्क छैन । गुरु भन्छन्,‘यस्तो पनि सम्बन्ध र प्रेम गाँसियो, ६ महिनासम्म माय पनि गरियो मस्ती पनि गरियो ।’
विवाहपछिको फरक सम्बन्ध भन्दा केही भिन्न हुन्छ सम्झौताको सम्बन्ध । तत्कालिक आवश्यकताको एउटा समयसीमासम्म सम्बन्ध गाँस्ने र त्यसपछि कुनै सरोकार नराख्ने प्रवित्ति अहिले सहरमा व्याप्त हुन थालेको छ । यस्तो सम्बन्धले परिचय, प्रेम र अपराध कर्म पनि गराउने गरेका नेपालमा प्रशस्त उदाहरण छन् ।
यस्ता सम्बन्धहरूको बारेमा खुलाउने ठाउँ प्रहरीको अपराध शाखा पनि हो । एक अधिकारी भन्छन्,‘थोरै समयमा सम्बन्ध बनाएर सबै कारोबार गर्ने अनि ठगी भयो भनेर पनि उजुरी आउने गरेका छन् । बुझ्दै र खोज्दै जाँदा प्रेमीप्रेमिकासम्म भएको पाएका छौं ।’
एक्स पार्टनरसँग रोमान्सः कति सही ? कति गलत ?
मानौ तपाईंको प्रेम सम्बन्ध टुट्यो । प्रेम किन टुट्यो ? दुबैले यसको दोष एकअर्कालाई थोपर्नुभयो । अविश्वास, आशंका यस्तै-यस्तै कुराले पनि तपाईंहरुको सम्बन्ध कायम रहेन ।
पछि तपाईं मनमनै घोत्लिनुभयो, ‘वास्तवमा के कारण थियो हाम्रो सम्बन्धमा फाटो ल्याउने ?’ तपाईं कारणहरु केलाउन थाल्नुहुन्छ । र, कुनै नतिजामा पुग्नुहुन्न । अर्थात कारण केही पनि फेला पार्नुहुन्न । सामान्य असमझदारी बढ्दै गएपछि नै तपाईं दुई जनाबीच मनमुटाव भयो । भनाभन भयो । र, दुबैले एकअर्कालाई त्याग्नुभयो ।
तर, अहिले तपाईंले महसुष गर्नुभयो, सम्बन्ध टुट्नुमा कुनै खास कारण थिएन । न उनको गल्ती थियो, न तपाईंको गल्ती थियो । दुबैबीच असमझदारी बढ्दै गयो र त्यसैले सम्बन्धलाई दुई चिरा पार्‍यो ।
अब तपाईंले आफ्नो गल्ती महसुष गर्नुभयो । तपाईंलाई यसले भित्रभित्रै पोल्न थाल्यो । गलाउन थाल्यो । ग्लानीबोध भयो । कमजोरी थाहा भयो ।
तपाईं पुन उनै पार्टनरकहाँ जानुहुन्छ ?
तपाईंहरुको भलाई छ, पुनर्मिलनमा । एकअर्काको गल्ती र कमजोरीलाई स्विकार्दै एवं सच्याउँदै तपाईंहरु जब फेरी मिल्नुहुन्छ । तपाईंहरुको सम्बन्ध थप एक तह अगाडि बढ्छ । यसले तपाईंहरुको माया डोरी थप कसिलो हुन्छ । रसिलो पनि ।
किनभने भोलिका दिनमा तपाईंहरुको सम्बन्धमा यस्ता सानातिना उल्झन आउनेछैन । किनभने विगतका घटनाबाट तपाईंहरुले पाठ सिक्नुभएको त । यसको अर्थ के भने, तपाईंहरु थप परिपक्क हुनुभयो । तपाईंहरुको सम्बन्ध अरु बलियो भयो ।
हामी कतिपय निर्णय भावआवेगमा आएर गर्छौ । यसरी गरिएका निर्णयहरु सही हुँदैनन् । अतः आफुले गरिने यस्ता निर्णयहरुमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भनिन्छ, सानोतिनो झैझगडा, तर्कवितर्कले नै सम्बन्धलाई अरु बलियो बनाउँछ । परिपक्क बनाउँछ । प्रेम सम्बन्धमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । त्यसैले एक पटक टुटिसकेको सम्बन्धलाई पुर्नस्थापित गर्न सकिन्छ । यस पछि जोडिने सम्बन्ध दीगो हुन्छ ।
यद्यपी यहाँ आइपुग्दा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने, जब पार्टनरले आफ्नो गल्ती कमजोरी स्विकार्दै पुन सम्बन्ध बनाउनका लागि प्रयास गर्छन्, त्यसमा आफुले पनि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । यहाँ आएर पार्टनरलाई कमजोर देखाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । पार्टनरलाई आफ्नो सामुन्ने झुकेको भनेर पनि बुझ्नु हुँदैन । यस किसिमको भावले आफुमा अहंकार एवं दम्भ पैदा गर्छ । अहंकार र दम्भले कहिले पनि कुनैपनि सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइरहँदैन ।
यसै सन्दर्भमा एउटा रमाइलो विषयमा खोज भएको छ । उक्त खोजको नतिजाले भन्छ, पूर्व गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाईफ्रेन्डवीच शारीरिक सम्पर्क भएमा त्यसले उनीहरुको सम्बन्धलाई अर्को आयमबाट अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिन्छ ।
एक्स पार्टनरसँग रोमान्स
सम्बन्ध टुटिसकेपछिको अवस्थामा कतिपयले आफ्ना पुराना यादहरु भुल्न सक्दैनन् । उनीहरु पुराना पार्टनरकहाँ पुन सम्बन्ध जोड्न चाहन्छन् । तर, अर्का पाटर्नर यसमा मञ्जुर हुँदैनन् । उनीहरु पुराना कुराहरु सबै भुल्ने चेष्टा गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा एक्स अर्थात पूर्व गर्लफ्रेन्ड/ब्वाईफ्रेन्डबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम भएमा त्यसले उनीहरुको सम्बन्ध अगाडि बढाउन मद्दत मिल्छ ।
के भन्छ अध्ययन ?
स्टेफनी स्पीलमन, जो स्पि्रंगरको जर्नलमा अर्काइब्स अफ सेक्शुअल बिहेवियरमा प्रकाशित एक स्टडीको मूख्य लेखिका हुन् । उनका अनुसार ब्रेकअपपछि आफ्ना एक्स पार्टनरसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाउनु कुनै नराम्रो होइन । यस किसिमको सम्बन्धले ब्रेकअपपछि पुर्नमिलन हुनु वा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनमा खास समस्या हुँदैन ।
वायेन स्टेट युनिभर्सिटीमा यस रिसर्चको काम भएको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार पूर्व पार्टनरसँग अन्तरंग पल बिताउनु एक राम्रो काइदा हो ।
मान्छे बस्ने रिसोर्ट २ दिनदेखि बाघको कब्जामा, कर्मचारीलाई पर्यो यस्तो आपत
विश्वलाई चकित पार्दै २५ वर्षीया यी महिलाले एकैपटक जन्माइन् ९ बच्चा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति
पिताको मृत्युमा छोरीहरुले मनाए उत्सव, यस कारण नाच्दै निकालियो शवयात्रा
संसारको एउटा यस्तो अनौठो गाउँ, जहाँ केवल ब’ला’त्कारी मात्र बस्छन
जसको एउटा भाइरल तस्बिरले उठायो पाँच दिनमै १८ लाख डलर
टेलिभिजनमा बाेल्दा बोल्दै प्रस्तोताको दांत खुस्कियाे, हेर्नुहाेस भाइरल बनेकाे भिडियाेसहित
बेहुला प्रेमिका लिएर भागेपछि बेहुलीले जन्ती आएका अर्कैसँग गरिन् बिहे
जब बैंकमा पैसा लिन ला’श पुग्यो, त्यसपछि कर्मचारीको सा’तो गयो